KUFSI IYO KADEED ADDUUN!!!!. W/Q: Maxamed Muuse Sh.Noor | Laashin iyo Hal-abuur
KUFSI IYO KADEED ADDUUN!!!!. W/Q: Maxamed Muuse Sh.Noor
Idil mar walba ay guur samayso waxay lahayd hal riyo oo kaliya taas oo ahayd sidee hooyo ku noqotaa goormaase noqon doontaa hooyada qof walba kula jecel yahay ee lagaa filayo xoolaha badana lagaaga baxshay, waa su’aal runtii daalisay maskaxda gabadhan yar ee nolosha imtixaanka adag usoo martay tan iyo maalintii ay garaadsatay ilaa maantadan.
Casharada qaar ee nolosha ma ahan kuwa la barto ee waa kuwa ay xaaladaha nolosha aad soo martay ama ku jirtid ku baraan idilna nolosha iyo xaaladaha is gaddiska badan ee ay soo martay ayaa ka caawinayay in xaalad walba ay wax uga barato nolosheeda.
Hadafyada nolosha ee idil ayaa ahaa kuwa ay baddalayeen mar walba xaaladaha nolosheeda, idl maadaama ay guurar badan soo martay waxna aysan uga soo kordhin dhib maskax iyo cuqdad nafsi mooyee ayey go’aansatay hadafkii ugu dambeeyay ee ahaa nolosheed in ay wax u qabato haddii ay ku guul dareesatay in ay hooyo noqoto waa in aysan ku guul daraysan in ay dadkeeda iyo nafteed ka madaxbaanaanayso baahidii markaa ka jirtay miyigii ay ku noolayd, micnaha ujeedada waa ina y nafteeda wax u noqoto, hadafkaasna waa ku guulaysatay ilaa xad ayaa la dhihi karay, dhaawac walba oo dhanka laabta ah oo soo gaaro micnaheeda maahan in ay gabi ahaanba dhaawacantay waxay ku tala gashnayd in hadaf walba iyo fakar walba oo ka dhex abuurma xaaladahaas adag ee nolosheda soo maray ay ka gun gaarto, heerka ay maanta taagantahayna waxaa la dhihi karay waaa mid ka abuurmay riyooyinkii hammigeeda oo ay gaartay.
Idil hadda waxay gashay jawi cusub, xaalad cusub iyo nolol cusub taas oo la doonayo in ay wax ka barato lana qabsato sida ay tahayna ay ku qasbantahay in ay ku aqbasho, waa hooyo dhali doonta Ubad aan aabo lahayn, waa hooyo nafsiyan u cuqdadaysan oo wax aysan waligeed ku riyoon kuna fakarin nolosha ay u yaboohday taana la doonayo in ay u aqbasho in ay tahay xaqiiq jirta oo sideeda ku aqbasho lana noolaato.
Hanit waa tacabtay Iidil, shaqsiyadna waa yeelatay oo tii ay u dhalatay mid kasii fiican ayey dhaqan ahaan ka kasbatay bulshada ay markaa ku dhax noolayd, xaqiiqdii idil waxaa la dhihi karay nolosheeda waa ku guulaysatay oo ilaa xad waa is maaraysay.
Idil fakarka sakan walba nolsoheeda hareeyay wuxuu ahaa ilmahan caloosha waaba galeenee marka ay soo baxaan muxuu noqon doonaa mustaqbalkooda, bari ka maalin su’asha ah aaway hooyo aabaheen maxay uga jawaabi doontaa, dhallaan noocee ah ayuu noqon doonaa ma Dhedig mise Lab, bulshada sidee u aqbali doontaa, ilaa intee iska dhaga tiri doontaa su’aasha ah aaway ilmahan aabahood?
Nolosha waa mid caqabado badan waxaana la yiri inta caqliga u saaxiibka ah ayaa doorata in ay wajahaan caqabadahaas xanuunka badan ee nolosha kasoo gaarto inta aan caqliga u saaxiibka ahayn oo kalsooni darrada dilootayna waxay isku dayaan in ay mar walba ka cararaan, balse su’aashu waxay tahay noloshan oo ah Buuro is daba yaala marka aad buur korto oo ka dagtana ay mid kale ku sugayso in aad korto, ilaa intee ka cararaysaa koridda buuraha is daba yaal ee nolosha, in aad cararto oo dhibsato miyeey nolosha kaaga haraysa? jawaabta waa maya, oo kaliya waxaad joojin doontaa koridda buuraha oo caqabadaha nolosha ka dhigan maalint ay nafta kaa baxdo, inta ka sokaysa waad ku qasbantaay in aad wajahdo.
Idil qofkaas caqliga badan ee fahamsanaa sida ay nolosha u dhigantahay ayey ahayd, maadama ay jireen su’aalo iska horimaanaya oo nafteeda mashquuliyay hadan iskuma wada mashquulinayn in ay jawaab u hesho su’aalaha iyo xaaladaha isi sawiraya ee mustaqbalka.
Waxay markaas diiradda saaraysay sidii ay jawaab ugu heli lahayd waaqica markaa taagan waa xaaladda markaa haysatay iyo su’aalaha markaa ku taagnaa oo ay jawaabaha ku haboon ka fakaraysay.
Waa imtixaan adag runtii adiga oo qof dumar ah oo cid ku taageeraysa aysan jirin dadka dad kuugu sokeeyana dhabta nolsohaada haddii ay ogaadaan waxa aad ka filayso ay tahay dhibaato dhan walba ah, yaad u ciirsataa, yaasa waheshataa, yaasa caawin waydiisataa?
Idil waxay ogayd nafteeda maahanee cid kale in aysan haysan qasabna ay tahay in ay nafteeda u diyaariso wajihidda xaalad walba oo adag oo kasoo gaarto arrinkan ay hadda dhex maquurto.
Nasiib wanaag dhaqaala ku filan waa haysatay oo maanta ma ahan mid ka walwalaysa wax ay cunto iyo meel ay ku hoyato, taas macnaheedana waa in aysan qofna wax uga baahnayn, in aad qofna wax uga baahnayna waxay ka dhigantahay in aad asturantahay oo xaalkaaga iyo adigaba aad ilaa xad ka asturnaan kartiin in aad marti u noqotaan meel aan mudnayn in marti loo noqdo oo naftiina aysan ku faraxsanayn.
Idil nolosheeda hore ayaa iska ahayd mid qasan oo dhib iyo muruga badan taas oo ay kasoo gudabtayna waxay hadda ay taagantahay go’aansatay in mustaqbalkeeda iyo ubadka ay caloosha ku siddaba aysan murugo marti u noqon mar dambe.
Waa xaalad aan la inkiri Karin runtii xaaladda ay ku jirto, balse waddo kale uma furnayn aan ka ahayn in ay la noolaato sida ay tahayna ku aqbasho si nolosha horey ugu socoto, waxayna ogayd in howl badan oo adduunyo ay sugayso taas oo u baahan mas’uuliyad adag, maxaa yeelay, sidan hadduu noqday calafka nolsoheeda ma ahan in ay baroor iyo ba’ay meel la fariisto.
La soco Qaybta 23aad